Antenimierampirenena: tsy tokony hiandany ny mpitondra misolo toerana | NewsMada
Antenimierampirenena: tsy tokony hiandany ny mpitondra misolo toerana
Tokony tsy haneho fitongilanana sy fiandaniana. Telo ireo lehiben’ny andrimpanjakana misolo toerana vonjimaika amin’izao fitantanana ny firenena izao. Eo ny filoham-panjakana, Rakotovao Rivo, sy ny filohan’ny Antenimierandoholona, Andriambololona Mananjara, ary ny filoha mpisolo toerana eny amin’ny Antenimierampirenena, Andrianarivo Hary. Samy avy amin’ny antoko HVM avokoa ny roa voalohany ary manana kandidà filoham-pirenena amin’izao fifidianana izao.
Tsy avy amin’ny antoko politika kosa fa eo anivon’ny fikambanana Mampiray ny depioten’Ambositra, Andrianarivo Hary. Tsy manohana na iza na iza ny tenany ary mbola nohamafisiny tamin’ny lahateny fanokafana ny fotoam-pivorian’ny Antenimiera, ny 16 oktobra teo, izany. “Sady safidy sy antony nametrahan’ny filohan’ny Antenimierampirenena, ny kandidà Rakotomamonjy Jean Max, ahy hisolo toerana azy vonjimaika eny Tsimbazaza izany”, hoy izy tamin’izany.
Manoloana izany, nahagaga ny safidin’ity filoha lefitry ny Antenimiera, faritanin’i Fianarantsoa, ity tsy nanohana na niandany ny iray amin’ireo kandidà 36 nefa mety ho nahazoana vato betsaka izany amin’izao fifidianana izao. Manana ny lazany sy ny tanjany ary koa ny maha izy azy izy raha eo anivon’ny samy Betsileo. Tsy azo hadinoina koa fa ben’ny Tanàna ao Ambositra ny vadiny… Izany ny politika ?